Alahelom-bahoaka, herim-bahoaka… | NewsMada
Niaingan’ny fidinana an-dalambe ny amin’ny lalàm-pifidianana amboletra, mampiady, mampikorontana. Lany tamin’ny kolikoly tsinona, tsy araka ny lalàmpanorenana, manome tombondahiny ny mpitondra. Tsy nijanona teo ny raharaha, fa tonga amin’ny fitakiana ny fialan’ny filohan’ny Repoblika. Nahoana?
Eo ny “Raharaha 21 avrily”, saingy voaviravira avokoa amin’izao ny tsy fahombiazana sy ny fahalovan’ny fitondrana: tsy fanarahan-dalàna, tsy fisaraham-pahefana, fanaovana jadona sy famoretana, kolikoly avo lenta, fisian’ny tsimatimanota, fivarotan-tanindrazana, ny harem-pirenena gaboraraka… Tsy hita izay vahaolana!
Tsy vitan’izany, eo koa izay manjo ny vahoaka isan’andro vaky: tsy fandriampahalemana, fidangan’ny vidim-piainana, tsy fisian’ny asa, fandrobana tany, delestazy… Tsy hita koa izay tena vahaolana! Famonoana afo sy fampandriana adrisa no be. Soketaina ho manakorontana sy manongam-panjakana izay mihetsika.
Tsy mahagaga raha samy mamoaka ny alahelo ny rehetra amin’izao… . Fanararaotana? Efa niangona betsaka sy ela koa izany, hany ka lasa rano vaky ho azy. Tsy mba nezahin’ny fitondrana novahana isan-tsehatra tsinona ny olana sy ny hetahetan’ny vahoaka ifotony. Izao efa mitambatra be izao vao tsy hay tohaina.
Amin’izany, tsy mahagaga ny fitakiana ny fialan’ny fitondrana ankapobeny, indrindra ny filoha. Mitambatra sy mitambesatra aminy avokoa ny tsy fahombiazana sy ny fahavoazana. Inona àry ny vonjy rano vaky amin’izao fitosahan’ny alahelo sy ny fahoriam-bahoaka hatramin’izay izao? Eo ny raharaha…
Resaka etsy sy eroa ny hoe: olana politika izao, mila vahaolana politika. Inona? Tsy mandeha lalana intsony ny hoe fanajana sy fampiharana lalàna, efa tsy nasiana hasina izay ela izay. Politika io, miankina amin’ny fifandanjan-kery sisa… amin’izao hetsi-bahoaka izao. Toy ny fitambaran’ny alahelony ny heriny? Na izay mahafaka ny alahelom-bahoaka no afa-kandresy azy…